Ny sary mihetsika sy ny sary hita amin'ny iOS 7 dia miteraka olana amin'ny mpampiasa sasany | Vaovao IPhone
Mihamaro ny mpampiasa iOS no mitaraina noho ny olana amin'ny fampiasana ny fitaovany amin'ny iOS 7: fanina, fanina, mahatsiaro marary, eyestrain… Toa ny niavian'ireo zava-dratsy rehetra ireo dia ny sarimiaina vaovao an'ny iOS 7, miaraka amin'ny vokan'ny Parallax. Ny forum fanampiana Apple dia feno fitarainana momba izany, ary antenaina hamaha ny olana i Apple, satria tsy tranga mitokana izy ireo ary miresaka olana ara-pahasalamana ihany koa izahay.
Tsy hafahafa fa io karazana effets visuels io dia mety hisy fiantraikany amin'ny olona sasany mora tohina manokana. Tsy hoe manimba fahasalamana izany, mainka ny fampiasana iPhone na iPad amin'ny iOS 7, fa azo atao tsara ny mampiasa maharitra ny iPad anao, miaraka amin'ireo sary mihetsika rehetra ireo rehefa manokatra na manakatona fampiharana, rehefa mamoha ilay fitaovana. na ny fandefasana multitasking dia mety miteraka soritr'aretina voalaza etsy ambony. Vahaolana amin'ity olana ity? Tena mora: mamela ny hanafoanana ny sarimiaina rehetra ao amin'ny menio Accessibility an'ny iOS i Apple.
Ny menio Accessibility dia natao hanovana ny iOS mba hahafahan'ny olona manana olana sasany mampiasa tsara kokoa ny iPhone sy iPad. Ny teny sahisahy, ny menus notenenina ary ny fahaizana mifehy ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fametahana ny lohanao amin'ny ilany iray ary ny iray hafa dia isan'ny safidy marobe omen'i Apple ao. Izao dia izao, Apple dia mamela anao hanajanona ny vokatra Parallax sy ny mangarahara, fa ny sarimiaina dia tsy azo ovaina amin'ireo zana-tsipika ambany ao anatin'ny Accessibility. Tsy hitako izay olana amin'ny famelan'ny Apple hamela na hamono ireo sarimiaina ireo, ny sasany koa mitaraina satria mampiadana ny rafitra, satria tsy maintsy miandry ny vokany vao afaka manatanteraka asa iray. Na ho an'ireo na ho an'ireo izay miteraka olana dia vahaolana mety tsara ny bokotra tsotra hampihetsika na hanafoanana. Manantena aho fa hamaly tsy ho ela i Apple.
Fanazavana fanampiny - Esory ny mangarahara sy ny effets parallax hanatsarana ny zava-bita
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ny sary mihetsika sy sary amin'ny iOS 7 dia miteraka olana amin'ny mpampiasa sasany
Neci dia hoy izy:
Ahoana ny fahatsapan'ireo mpampiasa iOS.
Mitomany amin'i Apple mba hahafahanao manova zavatra amin'ny rafitra.
Ho an'ny zavatra hafa rehetra jailbreak na android
Valiny tamin'i Neci
Tsy mino an'izany aho .. Mahagaga fa ny effets parallax sns afaka manome fahatsapana vertigo sy fanina? Ny sasany izay tsy mahalala miverina amin'ny iOS6 dia tokony ho .. Eny, tsy misy na inona na inona hividianana nokia 3310 na zavatra toa izany .. Ary ho hitanao ny tsy fanananao fanina na vertigo!
Ny iOS 7.0.2 dia azo alaina (alaina fampidinana mivantana tafiditra)